Ndị Sameria Spam abụghị naanị jiri akaụntụ email ha iji kwurịta okwu, kamakwa na-enye aka na ikpochapụ spam maka ndị ọzọ. Ikpeazụ izu ụka nne di m na-akọwa etu o si gbahapụ Yahoo! Akaụntụ email ma kwaga Gmail, n'ihi na ọ bụ, "jupụtara na SPAM na enweghị ike ịgụ ya." Ihe ọ na-amaghị bụ na omume a na-ewute ndị na-eweta ọrụ ịntanetị (ISPs), ndị na-ere ahịa na ndị spammers.
Ndị na-enye Internetntanetị Ọrụ (ISPs) Achọrọ nzaghachi iji melite ahụmịhe email gị. Enweghị ndị ọrụ na-abanye mkpesa na akara email dị ka spam, ISPs enweghị ntinye iji chebe ndị ọrụ site na mmegbu.
ọtụtụ ISPs na-amalite omume nke inyefe ozi na folda spam / nnukwu na nlekota ma ọ bụrụ na ndị ọrụ mezie ha. Enweghị enyemaka nke ndị ọrụ, ndị na-ere ahịa email na-amalite inwe nsogbu aha, nke na-emebi nnyefe ha.
Adịghị ahapụ adreesị email ehichapụ, ọtụtụ ISPs ga-agbapụta akaụntụ ahụ ma jiri ya dị ka ọnyà spam iji kpochapụ ndị na-ezigara ya iwe. Nke a na-emebi ndị ahịa ziri ezi na-aga n'ihu izipu ozi ịntanetị, n'ihi na ha amaghị na akaụntụ agbahapụla.
marketers ga-eji nyocha A / B, mepee, pịa na ntụgharị iji dozie ozi ha ma melite itinye aka na ndị ọrụ. Ọbụna ma ọ bụrụ na ịhọrọ ịhapụ aha ha na ozi ha, ndị ahịa chọrọ, na mkpa gị na ịmekọrịta.
Ndị Spamm dị nnọọ ka ina ozi anapụta! Ha achọghị ịma ma ọ bụrụ na ọ kụọ igbe mbata gị ma ọ bụ folda spam / nnukwu. Site na ileghara mwakpo nke ozi ndị a na-achọghị anya, ha na-enweta ihe ha chọrọ. Ndị ọrụ nwere ike idozi esemokwu ahụ naanị site na ịdebanye ozi ndị a spam, na ịdọ aka ná ntị na ndị ISP n'okwu ahụ.
Mkpụrụ obi nke akụkọ a na-etinye minit ole na ole iji nyochaa ezigbo na spam na-enyere aka mee ka email ka mma maka gị na ndị ọrụ ndị ọzọ. Elegharala ozi ịntanetị ndị ahụ anya site na ndị spammers ma ọ bụ ndị ahịa. Site na wepu aha, tinye akara email dị ka spam, ma ọ bụ wepụ email site na nnukwu / spam folda, ị na-emewanye ozi email ahụ maka mmadụ niile.
Nyere nne di m aka, ma mee ka ụwa email bụrụ ebe ka mma… Bụrụ onye spam na-enye aka!
Tags: Auditing ikakantalupokwukwosteti email gharimmepe nke ngwaahịarepinssomedianyocha swipp
Ekwela Ka Mgbasa Ozi Gị Ghara Tta Ahụhụ Mmiri China
Mar 19, 2010 na 1: 05 PM
Marketingre ahịa email abụrụla otu ụdị azụmaahịa ndị a kacha eji eme ihe na ntanetị, na-ebute otu n'ime ihe kachasị dị irè maka azụmaahịa. Spam bụ ihe nkịtị ugbu a ma ọ ga-aga n'ihu na-eme.
Ihe ndị nwe ụlọ ọrụ kwesịrị ịma bụ na adịgboroja ga-ebibi ụdị ha na obere oge, ebe ọ bụ na nke a abaghị uru ma na-enye nsonaazụ dị oke karịa na ndepụta nwepu aha.